मनोविज्ञान Archives - HongKong Khabar
क्रान्ति सुब्बा आत्मरती अथवा अंग्रेजीमा नार्सिसिजम (Narcissism) अर्थात आत्मप्रेम या आत्ममुग्धता एउटा मनोवैज्ञानिक अवस्था हो। अरुको आवश्यकतालाई वास्ता नगरी आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुनु र आफ्नै रुप गुणमा मात्रै ध्यान दिनु आत्मरतिवादी कहलिनु हो। अथवा फ्रायडका अनुसार जब कुनै पनि मानिसको सम्बन्ध बाहिरी दुनियाँसंग टुटछ तब उ आफै तिर फर्किन्छ अनि स्व सम्बन्ध बिस्तारमा केन्द्...
क्रान्ति सुब्बा चेतना के हो ? भन्ने प्रश्न सर्वकाल कठिनसिद्ध अनुत्तरित प्रश्न हो। मानिस भएको नाताले हामीलाई थाहा छ हामी चेतनशील छौं किनकि हामी अनुभव गर्न र चिजहरुलाई महसुस गर्न सक्छौं । वैज्ञानिक देखि दार्शनिक सम्मले चेतना के हो? ब्याख्या गरेका छ्न आफ्नो पारामा तर प्रमाणित गर्न सकेका छैनन र यो कताबाट आएको हो भन्ने खुल्दुलीले उनीहरुलाई पनि उत्तिकै सताएको छ। अहिले ब्रह्म...